Mkpụrụ osisi Hydroponic gbara ọkpụrụkpụ Smart Garden Plant Grow Light Dash LED Na-amụba Ìhè China Manufacturer
Nkọwa:Ebube na-etowanye eto,Na-eto eto,Na-eto eto ọkụ
Home > Ngwaahịa > Ido Ukwuu LED > Ibulite Dọkspeet na-etowanye Ìhè > Mkpụrụ osisi Hydroponic gbara ọkpụrụkpụ Smart Garden Plant Grow Light Dash LED Na-amụba Ìhè
Mkpụrụ osisi Hydroponic gbara ọkpụrụkpụ Smart Garden Plant Grow Light Dash LED Na-amụba Ìhè
Nkwakọ ngwaahịa: 40X16X14 cm
Mmiri Hydroponic Smart Garden Na Na Na Na Na Na Na-eto eto nke Osisi
( 1) Hydroponics, Ọ bụghị ájá, Ọ dịghị ọgba aghara, Ọmarịcha mma, Ihe ndị dị iche iche, Ụlọ ọkụ na-arụ ọrụ na Desktọpụ
(2) 8.5W na ngụcha ọkụ ọkụ na ụzọ 3:
1) N'ịbụ ndị nwere ọgụgụ isi n'ụzọ na-akpaghị aka (Ejiji + Blue + Blue): Na ọnọdụ a, ìhè ga-agbanwe agbanwe na-akpaghị aka n'ihe gbasara gburugburu ebe obibi. usoro a bara uru maka ime ụlọ ebe ìhè na-adịghị, ìhè ahụ na-acha ọcha ga-eme ka ìhè dịkwuo maka osisi.
2) Mkpụrụ ọkụ na-eto eto (Red + Blue na-adị na ya): Red ìhè na-akwalite osisi germination, na-eme ka okooko, fruiting, nke na-arụ ọrụ na-eduzi. Mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka osisi na osisi ghaa. Ndị ọkachamara na-eto eto na-akwado ọnọdụ a mgbe osisi dị na ogbo nke germination.
(3) Ịgụ ọkụ ọkụ na-agụ (White): Eke ọkụ na-echebe anya gị
(3) Ntu osisi: Ọ dị mfe ịkụ mkpụrụ, ọ dịghị mkpa ka ị na-elekọta ihe dị oke mkpa, nsị dị mma maka onye na-enweghị ahụmahụ na-akụ.
(4). Otutu ojiji
Ụlọ ọrụ ụlọ na-ekpuchi ebe dị mita 1500 .
Ejiri ya na mmepụta ihe. akụrụngwa na usoro mmepụta nke ọkụ ọkụ , ele l amp, ìhè na ìhè n'èzí.
Dabere na mma iji lanarị, ihe ọhụrụ iji zụlite. Mee ka "onye ahịa buru ụzọ, nke mbụ, aha ọma, ọrụ mbụ". Na-agbasi mbọ ike ịbịaru ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ nke kachasị ọrụ na ngwa ngwa , na-adabere n'ịdị mma na nhazigharị nke ụkpụrụ ọrụ.
Q1: Gịnị bụ akwụkwọ ikike maka ọkụ gị?
A1: Maka ọkụ, anyị nwere akwụkwọ ikike afọ atọ , ụfọdụ ngwaahịa afọ 5 .
Q2: Olee otu ị ga - esi hụ na mma?
A2: Anyị na-enweta usoro atọ nke atọ : 1.N'ọnye ngwaọrụ; 3.Nke QC nwalee otu otu mgbe ịka nká 12 awa .
Q3: Otu esi eme ma ọ bụrụ na nsogbu nsogbu ọ bụla n'akụkụ gị n'oge oge ikike?
A3: Nke mbụ, buru foto ma ọ bụ vidiyo dị ka ihe akaebe ma zigara anyị. Anyị ga-eji dochie anya ndị ọhụrụ.
Q4: OEM ma ọ bụ ODM kwetara?
A4: Ee, anyị nwere ike ime OEM & ODM, logo na ọkụ ma ọ bụ ngwugwu abụọ dị.
Q5: Ugboro ole ka a ga-emecha ihe atụ?
A5: Kedu ụbọchị 5-7 maka ihe ntanetị na-eme. Oge kachasị nke mmepụta ihe ga-adabere n'ọtụtụ.
Q6: Gini bu mmesi obi ike ahia gi?
A6: 100% nchedo ngwaahịa
100% ngwaahịa na nchekwa mbupu oge
100% ịkwụ ụgwọ ụgwọ maka ego kpuchie gị
Kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnụahịa, mbupu na ihe ndị ọzọ!
Igwe Igwe Egwuregwu zuru ezu na-eto eto na-amụba ìhè maka ime ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Ebube na-etowanye eto Na-eto eto Na-eto eto ọkụ Ebube na-eto eto Ibe na-eto eto Egwu na-eto eto Cob na-eto eto Onye na-eto eto